बेलायतमा नेपालीहरुले आफ्नै व्यवसाय गर्नेक्रम बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय उच्च शिक्षाका लागि बेलायत आएका सूर्यप्रकाश गुरुङले पनि नेपालीहरुको बाक्लो बस्ती रहेको अल्डरसट, फार्नबोरो र आश्फोर्ड आसपासको क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर मोर्गेज तथा प्रोपर्टी व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । कास्की जिल्लाको उत्तर–पश्चिममा पर्ने तत्कालीन लुम्ले गाविस (अहिलेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका)को पात्लेखेत गाउँमा जन्मेहुर्केका गुरुङले स्थानीय संगम माध्यमिक विद्यालय चन्द्रकोटबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे । एसएलसीपश्चात पृथ्वीनारायण (पीएन) क्याम्पस पोखराबाट Intermediate of Science (I.Sc.) र Bachelor of Science (B.Sc.) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरबाट Master of Science in Chemistry (M.Sc.) गरे । पोखरा विश्वविद्यालयमा केही वर्षको प्राध्यापनपश्चात् उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बेलायत आएका गुरुङले यहाँ Strathclyde University बाट Master’s Degree in Management र Salford University बाट International Banking & Finance मा Post-graduate Diploma गरेका छन् । निरन्तर अध्ययनमा विश्वास राख्ने गुरुङले आफ्नो सीप र क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न व्यावसायिक तालिम पनि लिएका छन् । अध्ययन सँगसँगै विभिन्न कम्पनीमा काम गरी अनुभव हासील गरेका गुरुङले पीपल मोर्गेजेज (Peepal Mortgages) र पीपल स्टेट एजेन्टस् (Peepal Estate Agents) नामक आफ्नै व्यवसाय सुरु गरे । छोटो समयमा थुप्रै ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्न सफल दुवै कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशकसमेत रहेका गुरुङसँग एभरेष्ट टाइम्सका लागि ‘घान्द्रुके कान्छा’ले गरेको छोटो कुराकानी ।
अधिकांश युवाहरुको जस्तै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र आर्थिक उन्नतिका लागि म पनि सन् २००६ मा बेलायत आएको हुँ ।
धेरैजसो नेपालीहरुले रेस्टुरेन्ट, ग्रोशरी, सेक्युरिटीलगायतका व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, तपाईले मोर्गेज व्यवसाय नै किन रोज्नु भयो ?
विदेशमा बसेर पनि कसरी नेपालीको सेवा गर्न सकिन्छ भनेर सोच्दा, भर्खर भर्खर नेपालीहरुले घर किन्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । घर किन्ने बेलामा सहयोग गर्ने विचारले मैले २००९ सालबाट Mortgage Adviser काम सुरु गरें ।
आफूमा जुन विषयको ज्ञान, सीप र अनुभव छ, त्यसैसँग सम्बन्धित व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने लागेर मैले आफ्नै मोर्गेज व्यवसाय २०१६ बाट सुरु गरें । त्यसले गर्दा मलाई यो व्यवसाय गर्न सजिलो पनि भयो । साथसाथै आफ्नो व्यवसाय कसरी विस्तार गर्ने भनेर सोच्दा यही मोर्गेज व्यवसायसँग सम्बन्धित अर्को व्यवसाय Property sales, Lettings and Management २०१७ सालबाट सुरु गरें ।
तपाईले दुई वर्षमा दुईवटा व्यवसाय सुरु गर्नुभयो, अब निकट भविष्यमा अरु केही गर्ने योजना पनि बनाउनुभएको छ कि ?
म एकदम महत्वकांक्षा राख्ने व्यक्ति हुँ । मेरा धेरै सपना र योजनाहरु छन् । त्यसको बारेमा भविष्यमा नै कुरा गरौंला ।
त्यसोभए, तपाईको व्यवसायले दिइरहेको सेवा र सुविधाका बारेमा छोटकरीमा बताईदिनुहोस् न ?
हामीले पीपल मोर्गेजेजमार्फत व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आर्थिक विषयहरु (Mortgages, Protection, Home Insurance & Wills) मा सल्लाह दिनुको साथसाथै सस्तो र राम्रो मोर्गेज, प्रोटेक्सन र ईन्स्योरेन्सहरू खोजी दिन्छौं अथवा व्यवस्था गरिदिन्छौं । त्यस्तै, हामीले पीपल स्टेट एजेन्टस्मार्फत घर बेच्ने (Sales), भाडामा लगाउने (Lettings) र व्यवस्थापन (Management) गर्ने काम गर्छौं ।
घर खरिद गर्ने धेरैको सपना हुन्छ, कस्तो र कति आय भएका व्यक्तिले मोर्गेजमा घर किन्न सक्छन् ?
हरेक मानिसको आधारभूत आवश्यकता भनेको गाँस, बास र कपास हो । त्यसैले ‘घर किन्नु पर्छ’ भन्ने धेरै नेपालीहरुको मान्यता रहेको छ । साथसाथै हाम्रो समाजमा घर किन्ने भन्ने कुरा सामाजिक प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको हुन्छ । धेरैजसो नेपालीहरुले घर किन्न प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय सफल हुन्छन् भने कतिपयले पर्याप्त जानकारी नभएका कारण दुःख पाइरहेको अवस्था पनि छ । हामीले घर खरिद गर्दा दुःख नहोस्, सहज होस् भन्नाका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने गर्दछौं ।
तपाईले घर किन्ने योजना बनाउनसाथ हामीजस्ता मोर्गेज तथा फाइनन्सियल एड्भाइजरहरुसँग परामर्श लिनुभएमा पक्कै पनि झन्झट व्यहोर्न पर्दैन । मोर्गेज पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने कुरा कस्तो र कति बजेटको घर खरिद गर्ने हो, त्यसमा भर पर्ने कुरा हुन्छ । यदि तपाईको आयआर्जन थोरै छ तर ठूलै घर आँट्नु हुन्छ भने त्यहाँ सम्भव नहुन सक्छ । भनिन्छ नि, ‘घाँटी हेरेर हड्डी निल्नु पर्छ’, त्यसरी नै आफ्नो आयस्रोत, बजेट हेरेर ठिक्कको घर अथवा फ्ल्याट किन्न सक्नु हुन्छ ।
छोटो समयमा पनि धेरै ग्राहकहरु आकर्षित हुनुको कारण ?
हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता नै ग्राहकको हितको लागि काम गर्नु हो । हामी जहिले सुकै सेवा गर्न तत्पर हुन्छौं । हाम्रा ग्राहक प्रायःजसो नेपालीहरु नै हुनुहुन्छ । हामीले उहाँहरुलाई आप्mनै परिवारको सदस्यको रुपमा व्यवहार गर्छौं । उहाँहरुको आवश्यकता र चाहनालाई बुझेर आवश्यक गुणस्तरीय सल्लाह र सुझाव दिन्छौं । त्यसैले उहाँहरू हामीलाई विश्वास गर्नु हुन्छ ।
यो स्थानसम्म आइपुग्दा कतिको संघर्ष गर्नुपर्‍यो ?
कहिलेकहीं लाग्छ, मैले जति दुःख कसैले पनि गरेन होला । म विद्यार्थीको रुपमा बेलायत आएको हुँ । एउटा विद्यार्थीले गर्ने सबै दुःखहरु भोगेको छु । संघर्ष गरेको छु । हप्तामा ९०÷१०० घण्टासम्म काम गरेको छु । संघर्षको फल मीठो हुन्छ भन्छन् । आशा छ, कुनै दिन अवश्य फल मिल्छ होला ।
नेपालमा तपाई सम्मानजनक प्राध्यापन पेसामा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो, किन छाडेर आउनु भयो ?
युनिभर्सिटीमा पढाउने क्रममा समाजलाई केही अतिरिक्त सेवा गरौं भनेर युवाहरुलाई जागरुक बनाउनका लागि ‘परिवर्तनका लागि युवा’ नामक संस्था स्थापना गरेको थिएँ । उक्त संस्थामार्फत विभिन्न काम गरियो । त्यसका उद्देश्यहरु परिपूर्ति गर्नका लागि स्रोत र साधनहरु आवश्यक पर्न गयो । देश–विदेशका दाताहरुसँग सहयोग मागियो तर कहिलेसम्म मागेर संस्था
चलाउने ? कहिलेसम्म अरुको भर पर्ने ? मनभित्र आफैलाई सोधें । के सधै मागेर समाज परिवर्तन र विकास होला त ? त्यही बेला मैले निर्णय गरेँ, समाजको परिवर्तनकै लागि अब आफंै केही व्यवसाय गर्नु पर्छ । तर, त्यो मेरो रसायनशास्त्रको शिक्षाबाट सम्भव थिएन र विजनेस गर्नका लागि पर्याप्त धन पनि थिएन । त्यसैले विजनेससम्बन्धी अध्ययन गर्न र केही धन पनि आर्जन गर्न सकिन्छ कि भनेर विदेश आएको हुँ ।
नेपाल छाडेर कतै पछुतो त लागेको छैन ?
एक प्रतिशत पनि पछुतो लागेको छैन । तर, नेपाल आमालाई केही गर्न सकिएन भने पक्कै पनि पछुतो लाग्ने छ । नेपालीहरुका लागि त मैले आफ्नो व्यवसायमार्फत सेवा गरिरहेकै छु । तर, नेपाल राष्ट्रलाई भने जुन समाज परिवर्तनको मैले १२ वर्ष अगाडि परिकल्पना गरेको थिएँ, अहिलेसम्म केही गर्न सकिएको छैन । भविष्यमा पक्कै पनि देशको लागि केही गर्नेछु । यदी गर्न सकिएन भनेमात्र मलाई ठूलो पछुतो लाग्नेछ ।
नेपालीहरु विदेशिने क्रम बढ्दो छ, के गरियो भने विदेश आउनेक्रमलाई कम गर्न सकिएला ?
अधिकांश युवाहरु मुख्य गरी दुई कारणले विदेश जान्छन्, ‘क्वालिटी एजुकेशन र गुड इनकम’का लागि । तर, विडम्बनाको कुरा, नेपालमा अहिलेसम्म क्वालिटी एजुकेशन र गुड इनकमको वातावरण बनेको छैन । सरकारले क्वालिटी र व्यवहारिक एजुकेशनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ जसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकोस्, धेरै उद्यमी जन्माउन सकोस् । उदाहरणका लागि, मैले रसायनशास्त्रमा न्यूक्लियर बम बनाउने बारेमा पढें । त्यो नेपालको सन्दर्भसँग कत्ति पनि मेल खाएन । जसले नेपालका लागि होइन, विदेशका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्‍यो । मसँगै पढेका ५०÷६० जना साथीहरु अहिले जापान र अमेरिकामा वैज्ञानिक छन् । नेपाललाई त्यस्तो जागीर खाने शिक्षामात्र होइन, धेरै उद्यमीहरु जन्माउने खालका शिक्षा प्रणाली चाहिएको छ । जसले म आफै केही गर्न सक्छु भन्ने वातावरण सिर्जना होस् र रोजगारहरु सिर्जना गर्न सकोस् । यदी त्यसो भएमा बल्ल युवाहरु विदेशिने क्रम पक्कै पनि कम हुनेछ ।
तपाईकै जस्तो व्यवसाय सुुरु गर्न चाहनेहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अरुले के गरेछ भनेर त्यसको पछि नलाग्नुहोस् । आफ्नो क्षमता र दक्षता के मा छ, आफ्नो प्यासन केमा छ, त्यही क्षेत्रको व्यवसाय गर्नुहोस् । जसले तपाईलाई अवश्य पनि सफलता नजिक पुर्‍याउँछ ।
आजभोलि नेपाली समुदायमा च्यारिटीको कुरा गर्दा तपाईको नाम पनि जोडिने गर्छ, भित्री मनबाटै लागेर सहयोग गर्नुभएको हो कि व्यापार पोलिसी ?
समाजसेवा गर्ने विभिन्न माध्यमहरु हुन्छन् । च्यारिटीमार्फत मात्र समाजसेवा हुने होइन । व्यवसायको माध्यमबाट समाजलाई केही नौलौ र राम्रो सुविधा दिनु पनि सेवा नै हो । पीपल मोर्गेजबाट गरिएको कामहरु पनि सेवा नै हो । तर, तपाईले भन्न खोज्नुभएको Donation र Sponsor को बारेमा होला, मेरो मान्यता छ– सामाजिक विकासका लागि विभिन्न तरिकाले सक्दो योगदान दिन्छु । त्यसैले Donation चाँहि मैले व्यापार नै पाउँछु भनेर सहयोग गरेको हुँदैन । त्यस्तो सहयोगले अप्रत्यक्ष रुपमा मेरो व्यापारलाई सहयोग भने पुर्‍याउँछ नै । तर Sponsor हरु चाँहि मैले समाजका लागि केही दिन सकियो भने समाजले पनि मलाई पक्कै केही दिन्छ भन्ने व्यापार पोलिसी नै हो ।
नेपाली र नेपाली व्यवसायहरु राम्रो भयो भने सबै भन्दा पहिलो फाईदा नेपाली समुदायलाई हुनेछ । त्यसैले नेपाली व्यवसायहरुलाई प्रोहत्साहन गरौं र सहयोग गरौं । एकआपसमा सहयोग गर्दै अगाडि बढौं ।
Photo Courtesy : Shiva Raj Gurung
प्रकाशित : २०७४ फागुन ४